Yini engakutshela ngombala wezinwele zakho? Yimiphi imiphumela emlingeni wakho kanye nezimfanelo zabantu? Ososayensi abaningi babuza lo mbuzo bese bezama ukuthola insizakalo: ingabe uhlobo nobunwele bezinwele kuthinta ukuphela komuntu? Ake sizame ukwenza izinkolelo-ze ezikhona kule akhawunti bese sifika eqinisweni.
Abaningi banombono wokuthi ama-blondes ayiziphukuphuku futhi angenalutho emvelweni. Nokho, lokhu akukona iqiniso! Ngokuphambene nalokho, abantu abanombala wombala okhanyayo, banengqondo yokuhlaziya, ingqondo ecebile, ukucabangela kanye nekhono lokubala okucabangelayo. Lokhu cishe kwenzeka ukuthi i-genetic, ngoba uhlobo lwama-blonde lwakhiwe iminyaka eminingi ezindaweni ezisenyakatho zeplanethi yethu, linomlingiswa ozimisele, ukuvimbela okungavamile kanye nenani elithile lobukhuni - konke lokhu kungumphumela wokuphila ezimweni ezibucayi, ezingekho esimweni sezulu.
Pho kungani izinduna zikhetha ama-blondes? Yebo, konke kulula. Amantombazane, afana namadonsa aseBarbie, abonakala sengathi, ekutholeni kuqala, kunokuba abathandekayo, abangenakuzivikela, abadinga ukunakekelwa nokunakekelwa. Ngaphezu kwalokho isithombe se-sweet and sexy Marilyn Monroe asinikezi abantu abaningi ukuthula. Ama-Blondes abangela amadoda ukuba abe nesifiso sokuba nawo, kodwa futhi nesifiso sokunakekela, ukuwavikela nokuwazisa. Abantu abaningi bacabanga ukuthi abanikazi bezinwele ezibucayi bayisiphukuphuku futhi bahlukumezeka, kodwa lokhu okushiwo yizinkolelo kungaphezu kokuyiqiniso. Ngokuvamile ngemuva kwesigqoko sedoli esingenayo i-naive, esivinjelwe ebuchosheni, sifihla ukubala, ngesilinganiso esithile sokuzidla nokuqapha, umuntu owazi kahle ukuthi ufunani empilweni nokuthi uyayifinyelela kanjani. Indoda iyayiqonda lokhu kuphela emva komshado, ngakho inani lehlukaniso nabanikazi bezinwele ezikhanyayo likhulu ngokungajwayelekile.
Ezinsukwini zakudala, abanikazi bezinwele zomlilo babesolwa ngokuthakatha futhi bashiswa esigxotsheni. Amantombazane anezinwele ezimvu ashushiswa yi-Inquisition. Abapristi bothando bathinta izinwele zabo obomvu, ukuze babonakale emifanekisweni yamadoda enesifiso ababengabanika.
Njengawo wonke amantombazane angavamile, ajwayelekile futhi ajwayelekile, abomvu abomvu nawo ujabulela ukunakwa okungajwayelekile kubantu abaningi. Bangakwazi ukuvakashelwa ngamahemuhemu ahlukahlukene amanga nokucabangela. Umbala obomvu ukhangayo, ukhomba futhi, ngandlela-thile, ngisho noyingozi, njengoba kuhlotshaniswa nelangabi, kuvame ukuvutha konke endleleni yawo. Ngomlilo, amahlaya amabi!
Ephasini lomhlaba, kuphela u-2-3% wabantu abomvu obomvu. Banobuhle obuhle, banamandla angenakuqhathaniswa futhi banelungelo lokuphila, baziwa njengabantu abathokozile nabathokozi. Ama-Beauties nalesi sithunzi sezinwele abhekwa njengabesifazane ababulalayo, abakwazi ukuhlobisa futhi bahlukanise ukuphila kwanoma yimuphi umuntu. Isizathu salolu thando lwasosayensi baseMelika ukuthuthukiswa kwesilinganiso esincane se-hormone esenza ukucindezeleka emzimbeni wabantu abomvu obomvu.
Uma owesifazane onamahloni ephupha, owesifazane wesibhamu uyimfihlakalo. Abantu abanemibala enombala abamnyama basuke bebuhlungu futhi bexhaphaza emvelweni. Ngenxa yezidlova ezinjalo ngokuvamile zifihla ukuzilahla nokuziphendulela. Emphefumulweni, abanikazi bezinwele zombala wephiko elihlambalazayo bancibilika ngokwanele futhi banamathele ekuziphatheni. Ama-brunette kaningi kunabanye abathanda izitayela zenkolo futhi baqhuba imikhuba ehlukahlukene yengqondo. Ngakho, ukhetha i-brunette kubangane bakho, ungamphathe ngokungafuni noma ngokuncane kakhulu. Akakwazi ukukuthethelela ngalokhu!
I-Shatens abantu abangabonakali?
U-Shatens, ngokungafani nabafowabo abanombala ogqamile, ongenakulibaleka, ngokuvamile akakwazi ukuphuma esixukwini. Abantu abanjalo ezimweni eziningi banokubukeka okuvelele, kodwa ngesikhathi esifanayo banamakhono afana nesimo sokuthula, ukuzola, ukumelana nezimo ezicindezelayo. Ukuqaphela ukuthi ngokubukeka kwabo akunakwenzeka ukufeza lokho abakufunayo, ama-shatens adonsela phambili ngokuqukethwe kwabo ngaphakathi nangokwesabisa. Abantu abanezinwele ze-chestnut umbala kuzo zonke izimfanelo zabo bangakwazi ukwengeza okuningi nokuxhumana, ingqondo "enomphefumulo" nokuthi, okubasiza ukuba bathole indlela yokuphuma kwezimo ezibonakala zikhubazeka. Lezi zimfanelo zizisiza kokubili empilweni yomuntu siqu nasemsebenzini.
Ngakho-ke, sanquma ukuthi, ngemuva kwakho konke, umbala wezinwele uthinta ububele bethu nokuziphatha kwethu empilweni. Ubuningi bamahomoni abukeka kumuntu ngalokhu noma umbala wezinwele, ubhale umshicileli wabo ohlelweni lwethu lwezinzwa kanye nomzwelo wethu wangaphakathi. Kwenzekani kubantu abanquma ukugqoka izinwele zabo ngombala ohlukile? Kungenzeka yini ukuthi u-brunette oye waba yi-blonde uqala ukukhula emkhakheni wezemisebenzi futhi ayeke ukucindezeleka? Ufuna ukuhlola? Paint izinwele zakho!
Umsebenzi wekilasi: izinwele zeSeptember 1 izinwele ezinde nezifushane
Ukwelashwa kwezinwele kusuka ekulahlekelweni kwamakhambi abantu
Isici somuntu waseTurkey
Okufanele ukwenze ehlobo ezweni
Zokupheka zasekhaya zamaski ebuso
Okufanele ukwenze uma umfana ekushaya
Okubalulekile ngekhekhe le-Easter - amaprotheni, kusuka ushukela oluyimpuphu, ne-gelatin - zokupheka ngezithombe ezinyathelo ngezinyathelo
Sihlobisa indlu: ubucwebe bekwindla ngezandla zethu
I-Horoscope ye-Gemini-Abesifazane ngo-December 2016
Iphupho lezinyosi elimnandi - ama-pancake ngobisi oluncibilikisiwe, izindlela zokupheka nezithombe
UNatasha Koroleva utshele ngokucindezeleka kwakhe
Izitshalo zangaphandle: i-epiphyllum
Ikhumba iyalondoloza ngama-apricot omisiwe
Izindawo ezingavamile zokuthatha izithombe zomshado